Wararka aan ka heleyno Magaalada Kismaayo ee Caasimadda KMG ah ee Jubbaland ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaasi Qarax lagula beegsaday mas’uul ka tirsan dowlad Goboleedka Jubaland, kaasi oo jugiisa la maqlay.
Qaraxa waxa lala beegsaday Agaasimaha wasaaradda Kalluumeysiga Jubaland oo lagu magacaabo Maxamed Khaliif, waxaana ku dhaawacmay isaga iyo hal askari oo kamid ah Ilaaladiisa gaarka ah.
Dhaawaca Agaasimaha iyo askariga kale ayaa markiiba loo qaaday isbitaalka Magaalada Kismaayo, halkaas oo lagu dabiibayo xaaladooda caafimaad, waxaana gurmad u sameeyay Ciidamo ka tirsan kuwa maamulka.
Intaas kadib Ciidamada ammaanka Jubbaland ayaa sameeyay howlgal baaritaano ah oo ay ku raadinayaan dadkii ka dambeeyay qaraxaas lala eegtay Agaasimaha oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso ah ee laga hago meelaha fog-fog
Al-shabaab warar ay ku qoreen barahooda Intenet-ka ayey ku sheegteen mas’uuliyada qaraxaas, iyagoona sheegay inay ku dhaawaceen Agaasime Maxamed Khaliif iyo qaar kamid ilaaladiisa oo xiligii qarxu dhacaayay la socday.
Dowladda Federaalka oo Jawaab deg-deg ah siisay Musharaxiinta Mucaaradka
Hoggaan cusub oo loo doortay Maxkamadda Caalamiga ah ee ICJ